Umshini wokugaya we-CNC, isikhungo se-Maching Vertical, 3 & 4 axis, China Supplier
Ulapha: Ikhaya1 / CNC Milling Machine, Kuqondile Maching Center, 3 & 4-eksisi, China S ...
UKUQINISWA OKUPHAKEME KOKWENZA IMETSHINI
Cnc maching isikhungo650
Ithebula szie: 900 * 400mm
Imoto enkulu: 5.5kw
Cnc maching isikhungo850
Ithebula szie: 1000 * 500mm
Imoto enkulu: 7.5kw
Cnc maching isikhungo855
Ithebula szie: 1000 * 550mm
Umshini wokugaya i-cnc 736
Ithebula szie: 1250 * 360mm
Cnc maching isikhungo 1160
Ithebula szie: 1200 * 600mm
Imoto enkulu: 11kw
Cnc maching isikhungo1270
Ithebula szie: 1360 * 700mm
Imoto enkulu: 15kw
Cnc maching isikhungo1370
Cnc maching isikhungo640
Ithebula szie: 1000 * 360mm
Imoto enkulu: 3.7kw
Umshini wokugaya i-cnc 720
Ithebula szie: 600 * 200mm
Imoto enkulu: 1.1kw
Uma ufuna ukucubungula indiza (indiza evundlile, indiza emile), inkatho (ukhiye, i-t-slot, i-dovetail slot, njll.), Izingxenye zezinyo ezahlukanisiwe (igiya, i-spline shaft, indawo evunguza), imbobo yangaphakathi, zonke izinhlobo ezigobile ebusweni, yokukhiqiza okuqinile kwe-revolution nokusika ukucubungula, umshini wethu wokugaya we-CNC uzoba ngumshini wakho wokukhetha omuhle.CNC umshini wokugaya usetshenziswa kakhulu ezingxenyeni zezimoto, amathuluzi kagesi, izithuthuthu, amathuluzi, i-hardware, imoto nezinye izinkambu.
Ukukhethwa komshini wokugaya we-CNC kuncike kubude bento yokusebenza, usayizi nemodi yokucubungula, ukucubungula ngokunemba, iqoqwana elincane naphakathi futhi ukukhiqizwa okuvame ukuphindaphindwa, ukusetshenziswa komshini wokugaya we-CNC kufaneleke kakhulu, uma izingxenye ezinkulu , Ukucubungula okukhulu kwesikhunta, kufanele ukhethe isikhungo sokucubungula i-gantry.Umshini wokugaya onezinga eliphakeme lokuzenzekelayo ungena esikhundleni somshini ovamile wokugaya, ukunciphisa umsebenzi wesisebenzi, umkhuba okhulisa umkhiqizo awunakugwenywa.Ukuzinza kwekhwalithi yomshini wokugaya we-CNC, izinga lokulawula kusuka umthombo, uqedile ngemininingwane, wamukelekile ukubuza.
Ividiyo yomshini wokugaya we-CNC
Ukuqina okuphezulu, ukuqina okuphezulu, isivinini esikhulu
(Sitshele izidingo zakho, sizokucaphuna kungakapheli amahora angu-12)
Uyini umshini wokugaya i-CNC?
Umshini wokugaya we-CNC uyimishini yokugaya othomathikhi kakhulu, engakwazi ukwenza ukucubungula komsebenzi kungagadiwe. I-workpiece ingaba milling, imishini, isicefe, ukuqamba kabusha, ukuthepha nezinye izinqubo ngemuva kokucindezela okukodwa kuphela. Ngokuya ngesimo, usayizi, ukucacisa nobuso besimo sezingxenye nezinye izidingo zobuchwepheshe ukuthuthukisa inqubo yokucubungula, khetha amapharamitha wokucubungula. Ngokusebenzisa uhlelo olwenziwayo noma uhlelo oluzenzakalelayo usebenzisa isoftware ye-CAM, uhlelo lokucubungula oluhleliwe lufaka kwisilawuli. Ukunyakaza okwenziwa ngesandla okwenziwe ngesandla kuyashintshwa ukuze kukhuphuke okokusebenza futhi kuqondanise umsiki, ukunyakaza okuqhubekayo noma isondo lesandla ukuhambisa ithuluzi lomshini. Setha indawo yokuqala ekuqaleni kohlelo bese usetha ibhentshimakhi yethuluzi. Ngemuva kokulawula uhlelo, isilawuli sidlulisa imiyalo kudivayisi ye-servo. Idivayisi ye-servo ithumela isinali lokulawula kumoto we-servo. I-motor yokuphotha yenza ithuluzi lizungeze, futhi i-servo motor kusiqondisi se-X, Y no-Z ilawula ukuhamba okuhlobene kwethuluzi nendawo yokusebenza ngokulandela ithrekhi ethile, ukuze kubonakale ukusikwa komsebenzi.
I-Multi-surface machining ingakhulisa i-eksisi yesine, epulatifomu ehambayo ukwengeza ukujikeleza okungama-360-degree kwekhanda lokuhlukanisa ugesi, ukuze ikwazi ukufeza imbobo yokuhlukanisa othomathikhi, imishini yokugaya kanye nenye indawo eyinkimbinkimbi ebusweni ukucutshungulwa okuphezulu, ngaphandle kokulahlekelwa ngokunemba kwesibopho sesibili.
Ukunemba komshini we-CNC, okulula futhi okusebenzayo, Kuyisici esibalulekile semishini yokunemba kwensimbi okunembile.
Izinhlobo zomshini wokugaya we-CNC
1, Ngokwe-Uthi lokuphotha ukuma eksisi isiqondisi ihlukaniswe mpo CNC Milling umshini, ovundlile CNC Milling umshini, gantry CNC umshini wokugaya, mpo futhi enezingqimba CNC milling umshini.
2, Ngokomsebenzi wokucubungula uhlukaniswe ngomshini ojwayelekile we-CNC wokugaya, umshini wokugaya we-CNC, umshini wokukopisha we-CNC wokugaya.
3, Ngokusho kwenani le-axis yokulawula ihlukaniswe ngemishini emibili ye-axis CNC, imishini yokugaya i-axis emithathu ye-CNC, imishini emibili ye-axis CNC milling, imishini yokugaya ye-CNC eminingi.
I-4, Ngokuya ngemodi yokulawula uhlelo lwe-servo ihlukaniswe yaba umshini wokugaya ovulekile we-servo system CNC, umshini wokugaya ovaliwe we-servo system, umshini wokugaya ovaliwe we-servo system CNC
Ukusetshenziswa CNC umshini wokugaya
Kusebenza kumishini yezimayini, yezimoto, i-aerospace, ukuphrinta, ukupakisha, imboni yezempi, isikhunta, ukuthumela, imishini yendwangu, imishini yezolimo, imayini ye-metallurgical, ithuluzi lokukhiqiza imishini nezinye izimboni imishini ebalulekile.
Ukwakhiwa komshini wokugaya we-CNC, izingxenye
Isikhungo sokuqala semishini emhlabeni sazalelwa e-United States ngo-1958. Inkampani e-United States ingeze ithuluzi lokushintsha ithuluzi kumshini we-CNC oyisicefe nowokugaya, ophawula ukufika kwesikhungo sokuqala semishini. Eminyakeni engama-40 edlule, kube nezinhlobo ezahlukahlukene zezikhungo zemishini. Yize zinemimo nezakhiwo ezahlukahlukene, ngokuvamile zakhiwa izingxenye ezilandelayo.
1. Izinto eziyisisekelo
Iqukethe umbhede, ikholomu nokusebenzekayo, okuyizingxenye eziyisisekelo zesakhiwo sesikhungo semishini. Lezi zingxenye ezinkulu zifaka izinsimbi zensimbi kanye nezingxenye zensimbi eziphothene. Kufanele bathwale umthwalo omile wesikhungo semishini nomthwalo wokusika ngesikhathi semishini. Ngakho-ke, kufanele babe nokuqina okuphezulu ngokweqile, futhi nazo ziyizingxenye ezinesisindo esikhulu nevolumu esikhungweni semishini.
2. izingxenye Uthi lokuphotha
Yakhiwa ibhokisi lokuphotha, imoto yokuphotha, othini lokuphotha kanye lokuphotha. Isivinini sokuqala, sokumisa nesokuzungeza kwesokuphotha silawulwa ngohlelo lokulawulwa kwezinombolo, futhi ukusika kwenziwa yithuluzi elifakwe kolwokuphotha. Ingxenye yokuphotha yinto yokukhipha amandla kagesi kanye nengxenye eyinhloko yesikhungo semishini. Isakhiwo salo sinomthelela omkhulu ekusebenzeni kwesikhungo semishini.
3. Uhlelo lokulawula izinombolo
Yakhiwe ngedivayisi ye-CNC, isilawuli esihlelwe, idivaysi yedrayivu yedrayivu kanye nemoto. Kuyisikhungo sesikhungo semishini ukwenza isenzo sokulawula ukulandelana nokulawula inqubo yokuchofoza.
4.Ukushintsha ithuluzi okuzenzakalelayo (ATC)
Umehluko ophawuleka kakhulu phakathi kwesikhungo semishini nethuluzi lomshini elijwayelekile ukuthi linamandla okucubungula izingxenye ezinqubweni eziningi futhi lineqoqo lamathuluzi wokushintsha ithuluzi lokuzenzekelayo.
5. Uhlelo lokulawula izinombolo
Le yingxenye eyinhloko yomshini wokugaya we-CNC, owakhiwa ngohlelo lokulawula lwe-CNC, iphaneli yokusebenza, i-generator pulse generator, umshayeli, i-servo motor nekhebula lamandla. Ilingana nobuchopho bamathuluzi womshini we-CNC, zonke izinhlelo namakhodi ahlelwe ohlelweni lwe-CNC.
6. Ukuvikelwa okuvalelwe ngokugcwele
Le ngxenye ilingana nezikhali zensimbi yomshini we-CNC, engavikela ithuluzi lomshini ekulimaleni kwangaphandle, iphinde ivikele opharetha nendawo yokusebenza ethonyeni lethuluzi lomshini. Iphaneli lesistimu nengxenye kagesi idinga ukufakwa kuyo.
7 isikulufa sebhola
Ukujikeleza kwe-servo motor akukwazi ngqo ukushayela okusebenzisekayo nesiphini sokuhamba. Kungenxa yesikulufa sebhola, ukujikeleza kwemoto, okuguqulwe kwaba ukunyakaza okuqondile kwetafula. Isikulufa sebhola kanye nenjini zixhunywe ngokuhlangana. Isikulufu nokusebenzisekayo kuxhunywe ngamantongomane.
Umhlahlandlela oqondile we-8
Lapho okusebenzayo kusebenza esisekelweni, nakanjani kuzokhiqiza ukungqubuzana nethuluzi lomshini. Umugqa wesitimela esiqondisayo udlala indima yokuthambisa nokunciphisa ukungqubuzana. Kukhona ibhola noma isakhiwo se-roller ngaphakathi. Ingaqinisekisa ukunemba nesivinini sokuhamba kwetafula.
9 uhlelo lokuthambisa
Iphampu kawoyela ye-elekthronikhi ihambisa uwoyela wokuthambisa endaweni yokuthambisa yethuluzi lomshini ukugcoba isikulufa esithwele ithuluzi lomshini, ukuze kuthuthukiswe ukwethembeka nempilo yesevisi yethuluzi lomshini. Uhlelo lokuthambisa uhlelo oluzenzakalelayo oluxhunywe nohlelo lokulawulwa kwezinombolo futhi olulawulwa uhlelo lokulawula izinombolo. Isikhathi sokuphumula nobuningi bokuthambisa kungalawulwa.
Uhlobo luni lomsebenzi olungele ukucubungula ngomshini we-CNC wokugaya?
I-CNC machining centre inezinzuzo zokuzenzekelayo okuphezulu, amandla aphezulu, ukucacisa okuphezulu, isivinini esikhulu nokuthembeka okuphezulu, kepha lezi zinzuzo zisuselwa ezimweni ezithile. Isikhungo semishini singadlala izinzuzo ezinhle kakhulu kuphela ngaphansi kwezimo ezifanele. Izici ezilandelayo zifaneleke kakhulu ezikhungweni zemishini.
1. Izingxenye zifakwa ekukhiqizeni ngezikhathi ezithile nangokuphindaphindiwe
Ukufuneka kwemakethe kweminye imikhiqizo kuhamba ngendlela ethile futhi kuyisikhathi sonyaka. Uma kusetshenziswa umugqa okhethekile wokukhiqiza, inzuzo ayifanele ukulahlekelwa. Ukusebenza kahle kokusebenza kwemishini ejwayelekile kuphansi kakhulu, futhi ikhwalithi ayizinzile. Ngemuva kokuthi i-batch (izingxenye) zesikhungo semishini zisikwe ngempumelelo, uhlelo nemininingwane efanele ingagcinwa, futhi ukukhiqizwa komkhiqizo okulandelayo kungaqala ukukhiqizwa inqobo nje uma sincane isikhathi sokulungiselela.
2. Izingxenye ezibizayo zokunemba okuphezulu
Ezinye izingxenye zidinga okuncane, kodwa ziyabiza. Abavumelekile ukuthi balahlwe. Zidinga ukucacisa okuphezulu nesikhathi esifushane sokwakha. Uma ithuluzi lomshini wendabuko lisetshenziselwa ukucubungula, lidinga amathuluzi amaningi omshini wokuxhumanisa umsebenzi, futhi kulula ukuthintwa yizinto zabantu ukukhiqiza okusaluketshezi. Uma isikhungo semishini sisetshenziselwa ukucubungula, inqubo yokukhiqiza ilawulwa ngokuphelele uhlelo, evikela izinto eziphazamisayo ekugelezeni kwenqubo, futhi inekhwalithi ephezulu yokukhiqiza nekhwalithi Inani elizinzile.
3. Izinhlobonhlobo ezahlukahlukene nezingxenye ezincane zamaqoqo
Ukuguquguquka kokukhiqizwa kwesikhungo semishini akubonakali kuphela ekuphenduleni okusheshayo kuzidingo ezikhethekile zezingxenye zokucubungula kepha futhi kungashesha ukufeza ukukhiqizwa ngobuningi futhi kuthathe ngokushesha imakethe.
Izingxenye ezinezakhiwo eziyinkimbinkimbi nezinqubo eziningi kanye nokucubungula okuningi kweziteshi
Ezinye izingxenye zinesakhiwo esiyinkimbinkimbi futhi zidinga imishini yenqubo ebizayo ukucubungula kumathuluzi wemishini ejwayelekile. Ukusetshenziswa komshini wokugaya we-CNC kudinga nokushintsha amathuluzi nezinsimbi izikhathi eziningi. Usebenzisa isikhungo semishini, kungenzeka ukuthi uqedele ukubhola, ukugaya, ukubhoreka, ukuthepha, ukugaya kanye nokunye ukucubungula okuningi ngesikhathi esisodwa.
5. Kunzima ukukala izingxenye
Isikhungo semishini sinezinzuzo eziningi ekusetshenzisweni kwalolu hlobo lwezingxenye
Yini ikhodi ye-G ne-M?
Ikhodi ye-M idlala umsebenzi osizayo kumathuluzi womshini we-CNC. Eminye imisebenzi yokushintsha ingasethwa ngokusebenzisa imisebenzi yokusiza, njenge-M3: ukujikeleza kokuphotha okuphambili, i-M4: ukujikeleza kwe-spindle reverse, njll.
G code, lungiselela umsebenzi. Ikhodi ye-G ngumyalo owenza umshini usethe imodi ethile yokucubungula. Njengokufakwa okuqondile, ukuhlanganiswa okuyindilinga, isinxephezelo sethuluzi, ukusungulwa kohlelo lokuxhumanisa, njalonjalo.
Imiyalo ye-M ne-G yimisebenzi eyisisekelo yohlelo lomshini we-NC. Ngalawa makhodi, uchungechunge lokunyakaza lungatholakala
Kuthatha isikhathi esingakanani ukufunda i-G code?
Kuthatha isikhathi ukufunda ikhodi. Akunasidingo sokufunda yonke ikhodi. Ungabuza incwadi eyireferensi uma uyikhohlwa. Kepha ukhiye ukwazi kahle ikhodi yohlelo lokusebenza ngalunye. Kunamanothi namathiphu amaningi, lapho usebenzisa ukuqonda ikhodi, uzoyibamba ngokuqinile futhi uyikhumbule. Khumbula, ungayibambi ngekhanda ikhodi, imayelana nokuthi uhlelo lokusebenza lunekhono kangakanani. Amakhodi amaningi ajwayelekile.
Ngokuya ngezisekelo ezahlukahlukene zabafundi, isikhathi sokufunda sohlelo lwe-CNC naso sehlukile, okuvame ukuthatha izinyanga ezimbalwa noma neminyaka.
Ukuhlolwa kwansuku zonke
Ukuhlolwa kwansuku zonke: lapho usebenza umshini, hlola lezi zenzakalo ezilandelayo ngamunye ngamunye. Uma kutholakala okuthile okungajwayelekile, thola imbangela ngokushesha bese ukukuqeda. Uma kunezinkinga ezingenakuxazululwa, sicela wazise inkampani yethu ngokushesha okukhulu ukuze ususe ukungajwayelekile ngokushesha okukhulu.
1.1 ngaphambi kokuqala
1) Bheka ukuthi ulayini wamandla, yonke imigqa namalunga wepayipi kulimele yini noma akuxhumane kahle.
2) Bheka ukuthi amafutha okugcoba kufanele engezwe yini emazingeni kawoyela wepompo kawoyela wokuthambisa nokuthi ngabe izinga elijwayelekile likawoyela webhokisi lamagiya wesikelemu lijwayelekile yini kumagazini wethuluzi elime mpo.
3) Bheka ukuthi inhlanganisela yamaphuzu amathathu ijwayelekile yini.
4) Bheka ipayipi likawoyela nokujoyina ukuvuza kukawoyela.
5) Hlola ukuthi ingcindezi yomoya yenhlanganisela yamaphuzu amathathu ijwayelekile yini nokuthi inkinobho yokucindezela ilungisiwe njengoba kudingeka.
6) Hlola ukuthi ngabe uketshezi lokusika lwethangi lamanzi ludinga ukwengeza yini uketshezi lokusika.
7) Bheka ukuthi ngabe insiza yokuvikela ukuphepha ijwayelekile yini futhi inokwethenjelwa, futhi akumele kube khona abasebenzi endaweni eyingozi.
2.1 ngemuva kokuqalisa
1) Bheka ukuthi ukukhuphuka kwezinga lokuphotha kuyinto ejwayelekile nokuthi kukhona umsindo ongajwayelekile.
2) Bheka ukuthi izinto ezilandelayo zepompo kawoyela wokuthambisa zivamile yini.
a. Ingcindezi yokuphakelwa kukawoyela iphakathi kuka-3kfg / cm2-4kfg / cm2
b. Ukuthi ukusetshenziswa kukawoyela wokuthambisa kuyinto ejwayelekile (uma ukusetshenziswa kushesha kakhulu, isekethe lamafutha kufanele lihlolwe ukuvuza kwamafutha).
c. Ukuthi isikhathi sokusebenza sepompo kawoyela sijwayelekile yini (Kunconywa imizuzu emi-3-6cc / isikhathi / 5).
3) Bheka ukuthi uhlelo lokucubungula seluphelile yini.
4) Hlola ukuthi ithuluzi machining seliphelele.
5) Bheka ukuthi umdlalo usushintshile nokuthi i-datum yawo isishintshile.
6) Naka ukuthi ngabe i-transformer ikhiqiza ukushisa okuphezulu noma kunini.
7) Njalo faka amanzi kusihlungi enhlanganisweni yamaphuzu amathathu ukuqinisekisa ukuthi igesi yomile.
8) Ukuthi ukushaya kokuphotha kujwayelekile yini.
1.3 ngemuva kokusebenza
1) Susa wonke ama-chip asetafuleni, isihlangu esine-shaft emithathu, ithangi lamanzi, isihlungi sesikrini nesihlangu esikhulu.
2) Imbobo yangaphakathi yokuphotha kufanele isulwe ihlanzeke.
I-3) Ukufakwa kwesibambo kufanele kususwe nganoma yisiphi isikhathi futhi njalo emahoreni ayisishiyagalombili.
I-4) Hambisa ama-axis amathathu maphakathi nohlangothi ukuze ugcine ibhalansi.
5) Ngemuva kokufaka uwoyela wokuqinisekisa ukugqwala kokusebenza, susa amachips.
6) Ngemuva kokuphela kokushintsha, ukubonakala kwawo wonke umshini kufanele kuhlanzwe kanye.
7) Hlola ukuthi iminyango yezokuphepha ivaliwe kahle yini.
8) Bheka ukuthi iswishi yamandla icishiwe yini.
9) Bheka ukuthi inkinobho yomthombo wamandla icishiwe yini.
2 ukunakekelwa okujwayelekile
2.1 imiyalo yesondlo
1) Ukuqinisekisa ukuphepha komsebenzi wokulungisa, yonke iminyango kagesi kanye nezihlangu kufanele kuvalwe, ikakhulukazi ibhokisi lokulawula nebhokisi lokusebenza.
2) Akuvunyelwe ukusebenzisa isibhamu somoya noma umoya ocindezelwe ukuhlanza ithuluzi lomshini (ukuvimbela imfucumfucu nothuli olungena endaweni yokuthwala noma kusilayidi).
3) Ngaphambi kokwenza umsebenzi wokulungisa nokulungisa ngaphezulu nangasemuva kwethuluzi lomshini esembozweni sokuvikela, qiniseka ukuthi ucisha inkinobho yamandla kuphaneli yokusebenza, bese ucisha ugesi. Ngasikhathi sinye, zilenga izimpawu zokuxwayisa ukuvimbela abanye ekuvuleni umshini.
2.2 ukugcinwa kwansuku zonke
1) Susa ama-chips, uthuli nama-sundries kuzo zonke izingxenye eziveziwe zethuluzi lomshini nokulungiswa, bese ususa ama-chips, uthuli namasundries kusivumelanisi sethuluzi noma amanye amathuluzi asizayo.
2) Hlanza umshini wokuphotha.
3) Hlola ukuthi ngabe uwoyela wempompo kawoyela wokuthambisa udinga ukwengeza uwoyela omusha nokuthi ingcindezi kawoyela ingaphakathi kobubanzi obucacisiwe (3-5kgf / cm2).
4) Hlola ukuphakama kwezinga likawoyela wethangi lenhlanganisela yamaphuzu amathathu ukubona ukuthi ingabe uwoyela omusha udinga ukwengezwa yini.
5) Bheka ukuthi amanzi esihlungi enhlanganisweni yamaphuzu amathathu akhishiwe ngokuphelele.
6) Hlola ukuthi ingcindezi yomoya wesekethe yomoya ijwayelekile (inani ≥ 6 kgf / cm2).
7) Bheka ukuthi kukhona yini ukuvuza kukawoyela esifundeni sikawoyela nasekuhlanganeni, bese uthatha ukwelashwa okufanele.
8) Hlanza ingxenye yokubamba yesibambo ngasinye kumagazini.
9) Hlola ukuthi uketshezi lokusika ludinga ukungezwa yini bese uqala umshini ukuhlola ukuthi ngabe inqubo yokupholisa isebenza ngokujwayelekile yini.
10) Hlanza izingxenye zikagesi eziveziwe kanye nemikhawulo yokushintsha.
11) Bheka ukuthi wonke amalambu okusebenza noma amalambu okuxwayisa ajwayelekile yini.
12) Gcina imvelo ezungeze umshini ihlanzekile futhi iqoqekile.
I-13) Bheka i-breaker ukuthola ukubekwa ngokweqile kwekhabhoni.
2.3 ukunakekelwa kwamasonto onke
1) Yenza isondlo nsuku zonke
2) Bheka phezulu kokuphotha nezinye izingxenye ezisebenzayo ukuthola umsindo nomonakalo ongajwayelekile, bese uhlanza uzungeze uthi lokuphotha.
3) Bheka ukuthi imvelaphi ye-eksisi ngayinye iyaqhuma.
4) Hlanza isihlungi sesithangi samanzi, bese ufaka isipholisi lapho singenele.
5) Hlanza isihlungi sesikrini esihlukaniswe ngamaphuzu amathathu.
6) Qinisekisa ukuthi isenzo sokuphotha nokuxegisa sibushelelezi.
7) Qinisekisa ukuthi ushintsho lwamathuluzi lubushelelezi yini.
8) Hlola ukuthi ingabe ipompo yokugcoba isebenza ngokujwayelekile (3-6cc / isikhathi / imizuzu emihlanu, umfutho kawoyela 3-5kfg / cm2).
2.4 isondlo sanyanga zonke
1) Yenza isondlo masonto onke.
2) Hlanza ngaphakathi kwebhokisi lokulawula, iphaneli yokusebenza kanye nesihlungi sesikrini sokushisa.
3) Hlola izinga le-worktable bese uqinisekisa ukuthi amabhawodi wehange akhiyiwe.
4) Bheka ukuthi umugqa womhlahlandlela wama-axis amathathu udinga ukulungiswa.
5) Hlola ukusebenza kwe-valve ye-solenoid ne-switch switch.
6) Hlanza ibhulashi lesitimela somhlahlandlela we-axis ezintathu bese usibuyekeza uma kunesidingo.
7) Bheka oxhumana naye ompofu lapho isixhumi socingo sikhululekile.
8) Bheka ukuthi isifunda sikawoyela asivimbekile yini, bese uhlanza isikrini sokuhlunga ejoyintini lapho singavimbekile khona.
9) Hlola ukuthi ngabe idivaysi yokuxhumana ne-timer kuvamile yini, hlola ukuthi ngabe iphuli linengcindezi efanele yini futhi ulihlanze.
10) Khama uketshezi lokusika, hlanza ithangi lamanzi nepayipi lamanzi, bese ufaka uketshezi lokusika.
11) Qinisekisa ukuthi isilawuli se-NC sisebenza ngokujwayelekile.
12) Gcoba shaft counterweight chain shaft kanye ngenyanga.
2.5 ukugcinwa kwesigamu seminyaka
1) Yenza isondlo sanyanga zonke
2) Hlanza iyunithi le-NC, iyunithi yokulawula, nethuluzi lomshini.
3) Miselela uwoyela wokugcoba wohlelo lokucindezela uwoyela, gcoba u-gearbox womagazini wethuluzi eliqondile bese uhlanza umgodi wangaphakathi.
4) Hlola ukususwa emuva kwemiphini emithathu bese uyayilungisa.
I-5) Hlola inani legridi yama-axis amathathu bese uyalungisa.
2.6 isondlo saminyaka yonke
1) Hlanza wonke ama-motors.
2) Bheka ukuthi ukushintshwa kokulawula kuphaneli yokusebenza kuyazwela futhi kujwayelekile.
3) Bheka ukuthi uhlelo lokuhlola luhamba kahle yini.
4) Thola ukuthi iketanga le-counterweight lisetshenziswa ngokujwayelekile.
5) Susa idiphozi yekhabhoni koxhumana nabo bazo zonke izixhumi ebhokisini likagesi bese uyisula ihlanzekile.
Izingxenye ezi-3 zokulungiswa nokulungiswa
3.1 lo msebenzi olandelayo kufanele wenziwe ngaphambi kokufaka ezinye izingxenye.
1) Bhala inombolo yomshini.
2) Bhala okucacisiwe nomkhiqizo wezingxenye ezithathelwe indawo.
3) Maka ubuhlobo besikhundla phakathi kwengxenye nezinye izingxenye ezihlobene, ukuze bahlangane kahle.
Izinyathelo zokuphepha ze-3.2
1) Abasebenzi besondlo kumele baqonde izinyathelo zokuvala bese benza umsebenzi wokulungisa ngemuva kokuvala.
2) Lapho ulungisa ingaphakathi:
a. Cima ugesi kuqala;
b. Uma kunesidingo sokuvula amandla ukondla, khiya umshini kuqala bese ufaka ngaphakathi;
c. Susa amachips angahle anyathele noma athinte indawo ukuyivimba ukuthi ingaklwebheki ngama-chips;
d. Sula amafutha kawoyela ne-chip liquid lapho unganyathela khona ukuvimbela ukushelela.
3) Ngemuva kokuthi kufakwe into entsha, akuvunyelwe ukulahla into endala ngaphambi kokuqinisekisa ukusebenza kwayo okujwayelekile.
3.3 amalungelo nemisebenzi yesondlo
1) Izinto ezivunyelwe ukusingathwa ngabasebenza ngokwazo:
a. Izikulufu nezinsimbi zensimbi ezithinta ukunemba kwamathuluzi omshini.
b. Izingxenye ezilula ezithengiwe, njenge-fuse, switch, isifunda samafutha, ukuhlangana kwepayipi, njll.
2) Abasebenzi abaneziqu zobungcweti bayadingeka kulo msebenzi olandelayo wokulungisa:
a. Ukuqhutshwa kokuphotha okweqile;
b. Uthi lokuphotha lunomsindo ongajwayelekile;
c. Ukugcinwa kwesikulufu somhlahlandlela;
d. Ukulondolozwa kwezingxenye zokudlulisa ama-eksisi amathathu (isihlalo sokudlulisela, isihlalo samantongomane, ukuxhaswa kwesikulufu nokuzala, njll.
e. Ithuluzi magazini ukugcinwa.
f. Ukuphathwa kokuwa kommese nokushayisana